यस्ता छन् स्वास्थ्यको लागि अश्वगन्धा खानुका फाइदाहरु, जानी राखौ
नोभेम्बर 16, 2019 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments अश्वगन्धा, स्वास्थ्य
आयुर्वेदमा अश्वगन्धालाई प्रमुख औषधिको रूपमा लिइएको छ । यसको वैज्ञानिक नाम Withania Somnifera हो । यो सोलेनेसी बर्गको बिरूवा हो । यो यसका ३००० प्रकारका जातहरु पाइन्छन् । यो औषधि नेपालको हिमाली क्षेत्रमा पाइन्छ ।
अश्वगन्धाको स्वाद घोडाको जस्तो भएकाले अश्वगन्धा भएको भन्ने एकथरी छन् भने अर्को थरीले यो औषधि सेवन गर्नाले घोडा जस्तो बलियो हुने हुनाले अश्वगन्धा हुन गएको भन्ने भनाई छ । चाहे जे होस् आयुर्वेदमा यसलाई भिटामिनको रूपमा लिएको पाइन्छ ।
यो औषधि नेपालमा उत्पादन गर्न सकिने देखिन्छ । भारतले विगत लामो समयदेखि यसको उत्पादन गरेर देश विदेशमा पठाएको छ । कम लागतमा उत्पादन गरेर राम्रो पैसा भित्राउन सकिने देखिन्छ । आजको लेखमा मैले अश्वगन्धाबाट के कस्ता रोगको उपचार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा प्रकाश पार्नेछु।
अश्वगन्धाको प्रयोग यसरी गर्न सकिन्छ
१. पुरूषको लागी शुक्राणुको कमि हुनुलाई ठूलो समस्याको रूपमा लिन सकिन्छ । यसको प्रयोगले शुक्राणु बढाउने काम गर्दछ । यो औषधि दूधसंग एउटा ठूलो चमच दिनमा २ पटक खानुपर्दछ ।
२. दम र खोकीमा पनि यो औषधिले राम्रो फाइदा पर्दछ । अश्वगन्धाको चूर्णलाई हल्का मनतातो दूधसंग दिनमा २ पटक खान दिनाले दम र खोकी ठिक हुन्छ ।
३. स्वयत प्रदर सेतो पानी बग्ने समस्या भएका महिलाहरूलाई यो औषधिको सेवन गराउनाले राम्रो फाइदा गर्दछ । स्वयत प्रदरमा अशोग्धाको चूर्ण २ ग्राममा १/२ ग्राम जती वंशलोचन मिश्रण गरेर दूधसंग दिनमा २ पटक खान दिनु राम्रो फाइदा गर्दछ ।
४. अल्प विकसित स्तनलाई समेत यसको सेवनले स्तन बढाउन ठूलो मद्दत गर्छ । स्तन बढाउन इच्छा भएमा शतावरी चूर्णसंग मिलाएर दिनमा २ पटक दिने ।
५. महिलाहरूको प्रजनन क्षमतालाई समेत अश्वगन्धाले राम्रो फाइदा गराउदछ ।
नोट : यो औषधि जडिबुटी बेच्नेहरूसंग खरिद गर्न सकिन्छ । आजकाल यो औषधि हर्बल कम्पनीले क्यापसुलमा बनाएर पठाएको छ ।
औषधिको रुपमा बहुउपयोगी हर्रोको प्रयोग
औषधिको रुपमा बहुउपयोगी अमलाको प्रयोग
पुदिना खानुका फाइदाहरु र प्रयोगहरु
← गहतको प्रयोगबाट फाल्न सक्छ १० एम. एम. सम्मको पत्थरी
नास्ट र डिन बीच ईन्जिनियरिङ्ग ज्ञान तथा प्रविधिको विकासका लागि दुई पक्षीय सम्झौता →
नोभेम्बर 26, 2016 नोभेम्बर 26, 2016 साइन्स इन्फोटेक 0
स्वास्थ्यको लागि फूलगोभी खानुका फाइदाहरु
डिसेम्बर 13, 2019 साइन्स इन्फोटेक 2
मानव स्वास्थ्यको लागि नरिवल खानुका फाइदाहरू
अगस्ट 22, 2019 अगस्ट 22, 2019 साइन्स इन्फोटेक 1